ဝီကီပီးဒီးယား:သင်ခန်းစာများ/အပြီးသတ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
တည်းဖြတ်မလဲ ပုံစံချခြင်း အချိတ်အဆက်များ ရင်းမြစ်များကို
စာမျက်နှာများ မှတ်သားရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြီးသတ်
အခုဆိုရင် သင်ဟာ ဝီကီပီးဒီးယား ဝင်ရောက်ရေးသားဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို သိရှိသွားပါပြီ။ ဝီကီပီးဒီးယားကို စည်ပင်တိုးတက်အောင် သင်ကူညီပေးမယ့် ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရနိုင်ဖို့ sandbox ကို မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကူအညီတွေများ လိုအပ်ခဲ့ရင် Help:Contents စာမျက်နှာ ရှိပါတယ်။ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ဖို့ နောက်တွန့်မနေဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်! တစ်နေနေရာရာမှာ သောင်တင်မိနေတယ်ဆိုရင် သင့်မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးမယ့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ သင်ခန်းစာကို ပြီးစီးသွားတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာ တည်းဖြတ်နိုင်ပါစေ!
နောက်ထပ် လေ့လာစရာတွေများ ရှိပါသေးသလား?
ဒီသင်ခန်းစာကို အကျဉ်းချုံးပြီး နားလည်လွယ်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာအမြဲတမ်း လေ့လာသင်ယူစရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်...... Wikipedia:Getting started မှာ ပြည့်စုံတဲ့ လမ်းညွှန်တွေကို စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။ သင်ထောက်ကူ လမ်းညွှန်ဗီဒီယိုတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ လက်စွဲစာအုပ်တွေအတွက် ဝီကီမီဒီယာ စာအုပ်စင်မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ် ခေါင်းစဉ်များအတွက် မိတ်ဆက်များ...
ဝီကီပီးဒီးယား လမ်းညွှန် မိတ်ဆက်: ဝီကီပီးဒီးယားမှာ သွားလာနိုင်ဖို့ လမ်းညွှန် အပိုင်းငါးခု။ မိတ်ဆက်၊ Namespaces၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြန်ညွှန်းများ၊ အသုံးဝင်စာမျက်နှာများ၊ အကျဉ်းချုပ်။
ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ မိတ်ဆက်: ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ အသုံးပြုခြင်းအတွက် လမ်းညွှန် အပိုင်းငါးခု။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ၊ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာများ၊ ပုံစံ၊ နမူနာများ၊ အကျဉ်းချုပ်။
အကိုးအကားပြုခြင်း မိတ်ဆက်: အကိုးအကားပြုခြင်းအတွက် မိတ်ဆက်အပိုင်းငါးခု။ စိစစ်အတည်ပြုခံနိုင်မှု၊ အကိုးအကားထည့်ခြင်း၊ RefToolbar ၊ ခိုင်မာသော ရင်းမြစ်အကိုးအကားများ၊ အကျဉ်းချုပ်။
မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် မိတ်ဆက်: စည်းကမ်းများ အတွက် လမ်းညွှန်အပိုင်းလေးခု၊ မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အကြောင်းအရာ ရေးသားခြင်း၊ အပြုအမူ၊ အကျဉ်းချုပ်။
ဇယားများ မိတ်ဆက်: စာမျက်နှာများတွင် ဇယားများ ထည့်သွင်းခြင်း လမ်းညွှန်အပိုင်းလေးခု၊ ဇယားများမိတ်ဆက်၊ ဇယားများဖန်တီးခြင်း၊ အမျိုးအစားစီစဉ်နိုင်သော ဇယားများ၊ HTML နှင့် ဇယားများ။
ပုံတင်ခြင်း မိတ်ဆက်: ပုံတင်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်အပိုင်း ခြောက်ခု။ မိတ်ဆက်၊ အခမဲ့ အကြောင်းအရာများ၊ အခမဲ့မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများ၊ Wikimedia Commons ၊ ပုံအသုံးပြုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်။
အရေးအသားလက်စွဲ မိတ်ဆက်: အရေးအသားလက်စွဲအတွက် မိတ်ဆက်အပိုင်းငါးခု။ အချိတ်အဆက်များ၊ ပုံစံများ၊ ပုံများ၊ အကိုးအကားများ၊ တသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ အဖိုးတန်စိတ်ကူးများ။
အကြံပြုချက်များနှင့် အထွေထွေ အချက်အလက်များ...
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများမှာ ဝီကီပီးဒီးယားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကို ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အမှားများက သင့်ကို လုပ်နေကျ အမှားများကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
မိဘများအတွက် အကြံပြုချက်မှာ မိဘများနဲ့ အုပ်ထိန်းသူများအတွက် အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
မူဝါဒ ရည်ညွှန်းချက်များ ...
လမ်းစဉ်ငါးရပ် ဟာ ဝီကီပီးဒီးယား လည်ပတ်နေတဲ့ အခြေခံကျသော သဘောတရားများ ဖြစ်ပါတယ်။
သိက္ခာချခြင်း၊ တင်လိုက်သော အကြောင်းအရာအားလုံးဟာ အသရေဖျက်ခြင်း မဖြစ်စေဖို့ အားလုံးမှာ ဘယ်လိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယား မူဝါဒ
ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ခြင်း၊ အရွယ်ရောက် တည်းဖြတ်သူများ ကလေးသူငယ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုမူလုပ်ကိုင်ရမယ့် ဝီကီပီးဒီးယား မူဝါဒ
"Cheatsheet"၊ အခြေခံ တည်းဖြတ်ခြင်း စေခိုင်းချက်များ။
ရိုးရှင်းတဲ့ ရေးသားဟန်လက်စွဲ၊ သုံးလေ့ရှိသော ရေးဟန် လမ်းညွှန်ချက် စာစု။
NPOV သင်ခန်းစာ၊ ဘက်မလိုက်သော အမြင်ဖြင့် ရေးသားတတ်စေဖို့ သင်ခန်းစာတစ်ခု။
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အချက်အလက်နှင့် ရင်းမြစ်များ
စာအုပ်စင် - အရည်အသွေးမြင့်၊ အခမဲ့လိုင်စင်ဖြင့် စုစည်းထားမှုများ
Editing Wikipedia Illustrating Wikipedia Evaluating Wikipedia
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:သင်ခန်းစာများ/အပြီးသတ်ခြင်း&oldid=341254" မှ ရယူရန်
၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၆:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၆:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။